12:02 PM ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ပုံတွေ7comments
Text from Dhammapada(A practical guide to right living)
လက်ရေးကလဲ ကလေး လက်ရေးလောက်တောင် ကြည့်ပျော်ရှုပျော် မရှိ၊
သူက မသိတော့ လှတယ် လှတယ်နဲ့
While, I look up the sky,
I find the twinkle stars shine,
I find the clouds flying under the sky,
They look so fine ...
++ I murmur under stars and sky,
I love you, that is why ...
အရင်က သူ့ဆီ ပို့ဖူးတဲ့ ကဗျာကို သူ့ Sketch မှာ မြန်မာလို လက်ရေးနဲ့ ရေးပေးပါ ဆိုလို့ စာမရေးတာကြာတော့ လက်ရေးတွေက တောင်တစ်လုံး မြောက်တစ်လုံးနဲ့ ...
8:59 AM ကိုယ်သာ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်, ဘာသာပြန်သီချင်း7comments
ကိုယ်သာ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုနေထိုင်ပြုမူမယ်လို့ တွေးမိနေမယ့် မိန်းကလေးတွေ ဘယ်လောက်များ ... များနေမလဲ ဘီယွန့်ဆေးသီချင်း "If I wereaboy" နားထောင်ခဲ့အပြီး သိပ်အများကြီးမရှိစေချင်တော့ဘူးလို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ဘီယွန့်ဆေးကတော့ သူ ရဲ့ စိတ်ကူးကို "If I wereaboy" သီချင်းနဲ့ ပြောဖြစ်အောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ နဂိုက အသံအိုးကောင်းကောင်း အဆိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သလို ဒီသီချင်းမှာ ပိုပြီး နှစ်နှစ်ကာကာရှိလှတဲ့အသံနဲ့ ဆိုထားတယ်ဆိုတာ ဘီယွန့်ဆေး အမာခံပရိသတ်တွေ အသေအချာသိကြမှာပါ။ "If I wereaboy" သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘီယွန့်ဆေးက သူ့ရဲ့ MySpace account မှာ ပြောပြထားတယ်။
"If I wereaboy" ကို ရှင်တို့ နားထောင်နိုင်ပါပြီ၊ အရသာ ရိုးအီနေတွဲျ့ရြ သီချင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါက ကြီးပြင်းအောင်မွေးမြူဖို့ ခက်ခဲသလို ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးဖို့လဲ ခက်ခဲတာပဲ၊ အရသာအသစ်တွေဖြည့်ပေးထားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ .. လူတွေမှာ အားကြီးတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ ဒီလိုအနေအထားက ခံစားကြည့်ရတာကြိုက်တယ်၊ ဂီတချစ်တဲ့သူတွေကို အားပြင်းတဲ့စာသား။သီချင်းတွေနားထောင်စေချင်တယ်၊ ရှင်တို့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားလို့ရတဲ့သီချင်းမျိုးပြောတာပါ။ ကျွန်မဘဲလေးသီချင်းတွေကြိုက်တယ်၊ ကျွန်မက ဂီတကိုချစ်သလို၊ သီချင်းတွေကပြောတဲ့ ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ရတာကိုသိပ်ကြိုက်တယ်။ အဲဒါ လူတွေကို အဆက်အသွယ်ပြုပေးတယ်။ သီချင်းချစ်တဲ့သူတွေကို ကျွန်မရဲ့အသံကြားစေချင်သလို၊ ကျွန်မမှာရှိနေတဲ့ ပြောပြမှဖြစ်မယ့်စကားလုံးတွေသိစေချင်သေးတယ်။' တဲ့
အမေရိကန် R & B အဆိုတော် ဘီယွန့်ဆေးနိုးလ်စ် ရဲ့ "If I wereaboy" သီချင်းကို တော့ဘီဂက်ဒ် နဲ့ ဘီစီဂျီးန် တို့က ရေးပေးထားတယ်။ ဘီယွန့်ဆေးရဲ့ တတိယတကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ် "I Am...Sasha Fierce" ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ စီဒီစင်ဂဲလ်ကို ၂ဝဝ၈ နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့ကထုတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်း top chart 11 ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာ ပိုပြီးလူကြိုက် များခဲ့တယ်။
"If I wereaboy" ကို ဘီစီဂျီးန်က အများဆုံးရေးပေးထားပါတယ်။ ဂျီးန်ရဲ့ ကိစ္စတွေသီချင်းထဲမှာထည့်ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဂျီးန်နဲ့ ပရိုဂျူဆာ တော့ဘီဂက်ဒ် တို့ဟာ တိုင်းမ်စကွဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ လမ်းသလားနေရင်း လူငယ်လေးတွေရဲ့ ပြီတီတီဆွဲဆောင်မှုတွေကို တွေ့ကြုံတာကစပြီး သီချင်းစာသားတွေဖန်တီးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဂျီးန် ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အခုလိုပြောပြတယ်။
'ဂျီးန် က အဝေးဆုံးနေရာမှာနေဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားထားရတာ၊ အဲ့ဒီအတွက် သူ အင်မတန် ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေခဲ့တယ်။ ဂျီးန် ရဲ့အတွေး က သူသာယောကျာ်းလေးဖြစ်ခဲ့ရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ နောင်တရဖို့ အကြောင်းမရှိ ချစ်သွားမယ်တဲ့။ ဂျီးန်ရဲ့ စိတ်ကူးအတိုင်း "If I wereaboy" သီချင်း ဖြစ်လာခဲ့တာ၊ သူ့ရဲ့ ယောကျာ်းလေးမိတ်ဆွေဟောင်းထက် ဂျီးန်က အများကြီးကောင်းမွန်တဲ့သူပါ ။'
ဂျီးန် ပြောပြခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေကို ဂက်ဒ်က အသံဖမ်းယူဖို့ ထပ်ခါထပ်ခါပြောခိုင်းတယ်၊ နောက်တော့ သူတို့ တိုင်းမ်စကွဲကထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး စတူဒီယိုမှာ သီချင်းကို ၁၅မိနစ်တည်းနဲ့ ရေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဂျီးန်ကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့စဉ်က တော့ record company က ငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘီယွန်ဆေး သီဆိုခဲ့တဲ့အခါ အင်မတန် အားကောင်းတဲ့သီချင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပေါ် ဂျီးန်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေနပ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ 'ဘီယွန်ဆေး ဆိုနေတဲ့အသံက အသက်ပါလွန်းလို့ ကျွန်မ ပထမဆုံးနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါတုန်းက ခဏလောက်အသက်ရှုရပ်သွားခဲ့သေးတယ်' လို့ ဂျီးန်က ပြောခဲ့တယ်။
"If I were A Boy" ဗီဒီယိုကို youtube မှာ တင်လိုက်တဲ့အခါ မတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄၁၇ဝ၁ဝ၃၃ ဦးတောင် ရှိခဲ့တယ်။ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ ဒါရိုက်တာက ဂျိတ်နာဗာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ဗီဒီယိုမှာ ဘီယွန်းဆေးက ခင်ပွန်းသည်နဲ့ တစ်နေ့တာ ကတောက်ကဆဖြစ်ပုံကို ပြထားတယ်။ စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း ဘီယွန်ဆေးသွားလာလှုပ်ရှားနေပုံ ပြထားပြီး ဗီဒီယို အဆုံးမှာမှ ပရိတ်သတ်တွေကို တကယ့်အဖြစ်ကိုနားလည်သွားစေတယ်။
ဗီဒီယိုအစမှာ ... ဘီယွန်ဆေးနဲ့ သူမခင်ပွန်းတို့ဟာ 'ရင်းနှီးမှု' 'ရိုးသားအပြစ်ကင်းမှု' 'တာဝန်ယူမှု' ဒီလိုစကားလုံးတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ရွတ်ဆိုပစ်ပေါက်နေကြတယ်။ သီချင်းစတင်တဲ့အခါ .. ခင်ပွန်းသည်က မနက်စာအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန် ဘီယွန်ဆေး က သူမရဲ့ အလုပ်ကိုသွားဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေပြီ၊ ဘီယွန်ဆေးက ရဲအရာရှိဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အနားမှာ စမတ်ကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲအရာရှိက အမြဲလိုရှိနေတယ်။ ဘီယွန်ဆေးရဲ့အာရုံက အဲဒီရဲအရာရှိ ဆီမှာသာ စုပြုံနေတဲ့အချိန် သူမရဲ့ ခင်ပွန်း ရုံးဝန်ထမ်း က အလုပ်လုပ်ရင်း အွန်လိုင်းမှာ ဘီယွန်ဆေးအတွက် နားကပ်တစ်ရန်ဝယ်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေရှာတယ်။ မိတ်ဆွေယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ ညတိုင်းလို ဘီယာသောက်နေတတ်တဲ့ ဘီယွန်ဆေးကို ဒီညတော့ ပါတီကိုအတူသွားကြဖို့ ခင်ပွန်းသည်က တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ အဲဒီညမှာ ဘီယွန်ဆေးကို နားကပ်လေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘီယွန်ဆေးကတော့ အဲဒီသက်မဲ့နားကပ်လေးတစ်ရန်ထက် ပိုလို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ရဲအရာရှိနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွဲကဖို့ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေပြန်တယ်။ ခင်ပွန်းသည် က ဘီယွန်ဆေးကို အပြင်းအထန်အပြစ်တင်တော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဘီယွန်ဆေးတို့ရဲ့ နေရာအပြောင်းအလဲကို အမှန်အတိုင်းပြန်လည်ရိုက်ကူးပြလိုက်တယ်။ အမှန်တကယ်က ခင်ပွန်းသည်က ရဲအရာရှိဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့တွဲနေတာပါ။ ဘီယွန်ဆေးကတော့ ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါသ၊ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေ ထိန်းချုပ်ရင်း "If I wereaboy" စာသားအဆုံး ဗီဒီယိုကို အဆုံးသတ်ပေးထားလိုက်တယ်။
ဘီယွန်ဆေးရဲ့ ယောကျာ်းလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ ...
ကျွန်မသာ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ...
မနက်ခင်းတွေမှာ အိပ်ရာထဲမှာ အပျင်းထူမနေပါဘူး ..
ကျွန်မ လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေထဲ ပြေးဝင်နှစ်မြှပ်ပစ်လိုက်မယ် ..
ပြီးတော့ မိတ်ဆွေကြီးတွေနဲ့ ဘီယာသောက်မယ် ..
မိန်းကလေးတွေကို ဝေးဝေးသွားစေမယ် ..
သူတို့တွေက အတင်းတွယ်ကပ်လွန်းတယ် ..
ကျွန်မအလိုရှိတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ပဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးချင်ပါတယ် ..
သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ မဖြစ်ချင်ဘူး ..
ကျွန်မသိတယ် .. ကျွန်မနားလည်နိုင်တယ် ..
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုချစ်မြတ်နိုးရမယ်ဆိုတာကိုလဲ ခံစားနိုင်တယ် ..
ကျွန်မ ကျိန်ဆိုပြောရဲပါရဲ့ ..
သူမအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ဦး ဖြစ်ရစေ့မယ် ..
သူမ ပြောမယ့်စကားတွေကိုလဲ နားထောင်ပေးဦးမယ် ..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ .. ရှင်တို့ အလိုအပ်ဆုံးသူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ ..
ရလိုက်တဲ့ နာကျင်မှုတွေဟာ ဘယ်လိုဆိုတာ ကျွန်မသိထားလို့ပဲပေါ့ ..
သူက ရှင့်ကို အရာတိုင်းအတွက် အသုံးချသွားခဲ့ပြီး ..
ရှင်ကတော့ ရှင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံး ပျက်ဆီးကုန်တာကိုပဲ ရလိုက်တော့တယ် ..
ကျွန်မရဲ့ ဖုန်းကို ပိတ်ထားလိုက်ဦးမယ် ..
အားလုံးကိုပြောထားရဦးမယ် .. ဖုန်းပျက်နေပါတယ် ပေါ့..
သူတို့ ကျွန်မတစ်ဦးတည်း အိပ်ပျော်နေတယ် ထင်မြင်ကြပါစေ ..
ကျွန်မကိုယ်တိုင်အတွက် ကျွန်မရဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်းပဲ လှုပ်ရှားသွားလာမယ် ..
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ .. သူမက သိပ်ပြီးသစ္စာရှိတဲ့သူဆိုတာ သိတယ် ..
ကျွန်မပြန်အလာကို အဲဒီမိန်းကလေးက အိမ်မှာ စောင့်နေရှာမယ် ...
အိမ်အပြန်ကို စောင့်နေတယ် ..
သူက ရှင့်ကို အရာတိုင်းအတွက် ပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့ ..
ကဲ .. အခုတော့ ရှင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံး ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီ ..
ရှင် ခြေတစ်လှမ်းနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ ..
ပြောပါဦး .. အဲဒါက 'အမှားအယွင်း' တစ်ခုပါ လို့ ..
ရှင် တွေးပါဦး.. ကျွန်မကလဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ရှင့်ကို ခွင့်လွှတ်လိမ့်ဦးမယ်လို့ ..
ပြီးတော့ .. ရှင်ထပ်ပြီး တွေးပါဦး .. ကျွန်မက ရှင့်ကို စောင့်နေဦးမယ်လို့ ..
ကဲ .. ရှင့်ရဲ့ အတွေးရိုးရိူးတွေ မှားယွင်းကုန်ကြပြီ ..
ရှင်က ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် ပဲ ..
ရှင် နားမလည်းခဲ့ပါဘူး ..
မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ဘယ်လိုချစ်ခင်မြတ်နိုးရမယ်ဆိုတာ .. ရှင်တကယ်နားမလည်ပါဘူး ..
တနေ့နေ့တော့ ရှင်က ကောင်းမွန်တဲ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒ္ဒရှိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ် ..
ရှင် သူမရဲ့ စကားလုံးတွေလဲ နားမထောင်ခဲ့ဘူး ..
ရှင်တို့ အလိုအပ်ဆုံးသူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတောင် အဲဒီ ဒဏ်ရာကို ရှင် ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး ..
ရှင်က သူမဆီကပဲ ပေးကမ်းခဲ့သမျှ အချစ်မေတ္တာတွေ အကုန်လုံးယူခဲ့တာပဲ ..
ဒါပေမဲ့လည်းကွယ် .. ရှင်က ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ပါပဲ ..
3:37 PM ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို, လူ နှင့် အကောင်4comments
5:22 AM ဟိုဟို ဒီဒီ 1 comment
စန်တာကလောစ့်ဆီ ရေးတဲ့ စာတစ်စောင်
4:54 AM စန်တာကလောစ့်ဆီ ရေးတဲ့ စာတစ်စောင်, အက်ဆေး4comments
ဒီခရစ်စမတ်မှာလည်း ကလေးငယ်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေဦးမှာကိုသိပေမဲ့ စာရေးလိုက်ပါတယ်၊ မိဘစကားနားထောင်တဲ့ ချစ်စရာကလေးငယ်တွေနဲ့ ပြောင်နောက်နောက်ကလေးငယ်တွေ အတွက် သူတို့လိုချင်တဲ့ အရုပ်တွေစုဆောင်းရင်း၊ သကြားလုံးတွေတစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ထမ်းရင်း လိုက်လံဝေငှဦးမယ်မဟုတ်လား၊ ကျွန်မက ကလေးငယ်လေးမဟုတ်တော့ပေမဲ့ ဆိုးပေနေတဲ့ သူတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ စာကို အဆုံးထိဖတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်၊ ကျွန်မလိုချင်တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဒီခရစ်စမတ်မှာပြည့်ဝရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ၊ ကျွန်မတောင်းကြည့်ချင်ပါတယ်၊
ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မအမျိုးသားတို့အတွက် ချစ်စရာသမီးလေးနဲ့သားလေး ကို ပေးပါ၊ ကျွန်မအတွက် ကျွန်မတတ်ကျွမ်းတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလြဲမန်မြန်ပေးပါ၊ ဆားရ်ဘီးယန်းစကား (ဆရပ်စကီး) မြန်မြန်တတ်ကျွမ်းဖို့ ကူညီပေးပါ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုလဲ အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်လေသံမျိုးနဲ့ပြောနိုင်အောင် ကူညီပေးပါ၊ ကျွန်မ အမျိုးသားအတွက် လဲ သူဆွဲသမျှ ပန်းချီကားတွေအားလုံး ဈေးကြီးကြီးပေးသိမ်းကြုံးဝယ်မယ့် သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ကိုလဲ ကျွန်မတို့နဲ့လက်လှမ်းမှီတဲ့နေရာမှာ ပို့ထားပေးပါ၊ ကျွန်မ ချစ်ရတဲ့၊ ကျွန်မကို ကလေးတစ်ယောက်လို စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ ကျွန်မအမျိုးသားနဲ့လဲ အမြဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ ခေါင်းခဏခဏကိုက်တတ်တာကိုလဲ တားဆီးပေးပါ၊ စာရေးရတာ အမြဲအာရုံရဖို့ ခေါင်းကြည်နေဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ ကျွန်မရေးချင်သမျှလျှောက်ရေး၊ ကျွန်မလျှောက်ရေးသမျှထည့်ပေးမယ့် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နဲ့လဲ ကျွန်မကိုချိတ်ဆက်ထားပေးပါ၊
ကျွန်မ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလိုက်မိတာနဲ့ နှာချေ၊ ပြီးတော့ ဖျားတတ်လွန်းလို့ ဒီရာသီဥတုနဲ့ အမြန်ဆုံး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးပါဦး၊ နှင်းကျပြီးအေးလိုက်၊ မြူတွေပိတ်နေအောင်ဝေနေပြီး အေးလိုက်၊ မိုးဖွဲဖွဲနဲ့အေးလိုက်၊ လေအေးအေးနဲ့အေးလိုက် အေးနည်းမျိုးစုံအေးနေတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ဒီ ဒီဇင်ဘာမှာ အမြန်ဆုံး သင့်မြတ်ဖို့ ကူညီပေးပါ၊ အေးတဲ့ရာသီဥတုကို သိပ်ကြိုက်သလို အကျီင်္အများကြီးမ၀တ်ရပဲ၊ ခေါင်းစွပ်မစွပ်ရပဲ အပြင်ထွက်နိုင်အောင် ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ စောင့်ရှောက်ပါ၊
ပြီးတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရသ၀တ္ထုတိုလေးတွေရေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာမျိုးကိုလဲ ကျွန်မမေမေ ရေးချင်တဲ့ ဘာသာပြန်နိုင်ငံရေးစာမူတွေမှန်သမျှ ထည့်ပေးဖို့ ပြောထားပေးပါဦး၊ လမ်းဘေး တွေ့သမျှ ကွမ်းယာဆိုင် ဆေးရွက်ကြီးတောင်းတတ်တဲ့ ဖေဖေလဲ ကွမ်းယာဆိုင်က ကလားလေးတွေ၊ ကလားမလေးတွေ၊နဲ့ ကလားလို မတောက်တခေါက်ပြောရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေဖို့ ကူညီပေးပါ၊
မုန့်ဟင်းခါးစားချင်ပါတယ်၊ အစုံသုတ်၊ ရှောက်သီးသုတ်စားချင်ပါတယ်၊ IM ရုံးဘေး၊ သမ္မတရုံလမ်းကြားက ကလားကြီး လဘက်သုတ်လဲ စားချင်ပါတယ်၊ ကလားကြီးပလာတာကို ချောကြီး၊ ထူးထူး၊ ကိုပက်ထရစ် တို့ နဲ့ လုစားကြတာသတိရနေလို့ပါ၊ ကြက်သားကြော်ကျွေးဖို့ တွေ့တိုင်းပူဆာတတ်တဲ့ အွန်လိုင်းက သူရဦးကိုလဲ သူ ပူဆာတိုင်း ၀ယ်ကျွေးမယ့်အမတစ်ယောက်ကိုလဲ ရစေချင်ပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ကို အလုပ်တွေများများခိုင်းလို့ ကျွန်မတို့စိတ်ဆိုးတိုင်း ဘယ်တော့မှ လိုက်ပြီး စိတ်မဆိုးတဲ့ IM က မန်နေဂျာကိုဘန်နီကိုလဲ အမြဲပြုံးနေစေချင်ပါတယ်၊ ချောကြီးကို အလုပ်တွေဖိမခိုင်းပဲ ချောကြီးအတွက် မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါ၊ ချောကြီးလဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ နေစေဖို့စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ စင်္ကာပူက ပုံခဏခဏပြောခိုင်းတဲ့ဟန်ဟန်(မဟန်စု)လဲ အမြဲမြူးတူးပျော်ရွှင်နေစေဖို့စောင့်ရှောက်ပါ၊ လန်ဒန်က စာအရေးကောင်းလှတဲ့ ကိုမျိုးသာထက်လဲ laptop အသစ်လေးနဲ့ ပိုစ့်အသစ်အသစ်၊ စာအသစ်အသစ်တွေ အများကြီးရေးနိုင်အောင်၊ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေ ကြည့်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါဦး၊ သဘောအကောင်းလွန်တတ်တဲ့ ကိုစောဟန်လဲ သူ့ အသည်းလေးနဲ့ စက်ာပူမှာ လက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာကျွမ်းကျင်တဲ့ ထူးထူးလဲ ရှော့ပင်းစင်တာရှိသမျှအထပ် ရှိသမျှဆိုင်ခန်းအားလုံးရှောက်ကြည့်လို့ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီး ၀ယ်စေချင်ပါတယ်၊ ဘီယာသိပ်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း ဇော်ဇော်လည်း သူ့အသည်းလေးခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဘီယာတွေ၊ ၀ီစကီတွေ စိတ်ကြိုက်သောက်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးလိုက်ပါ၊ စရိတ်မထောင်းပဲ အတိတ်စောင်းပြီး ဆိုက်ပရပ်စ်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း နေညိုရင့်(ရဲထွတ်နောင်)လဲ မြန်မာအစားအစာတွေတစ်ဝကြီးစား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင် အလုပ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေ၊ IM က ဗြဲဗြဲ(ထွန်းနိုင်လင်း)လဲ အမြဲတမ်း တဗြဲဗြဲနဲ့ ရီမောပြုံးရွှင်နေအောင် စောင့်ရှောက်ပါ၊ စင်္ကာပူက ကွန်ပျူတာပညာရှင် အရွယ်တင်လှတဲ့ ပီပီ(ပြည့်ဖြိုးရှိန်)လဲ brand အကောင်းစားတွေပဲ ၀ယ်ချင်တဲ့အချိန်ဝယ်နိုင်အောင် စောင့်ရှောက်ပေးပါဦး၊ ကျွန်မ အမ ၀က်သိုးအတွက်လဲ စာအုပ်မြန်မြန်ထုတ်နိုင်အောင် ကူညီပါ၊ သူ့စာအုပ်မှာ သူ သုံးချင်တဲ့ ပုံတွေ ထုတ်ဝေသူက သုံးပေးဖို့လဲ ကူညီပေးပါ၊
အိမ်နားက မြေအောက်လမ်းထဲ အကော်ဒီယံတီးလို့ ပိုက်ဆံအလှူခံတဲ့သူကြီးလဲ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရဖို့ စောင့်ရှောက်ပါ၊ ဂျစ်ပဆီကလေးငယ်တွေအတွက်လဲ သူတို့လိုအပ်သမျှတွေဖြည့်ဆည်းပေးပါ၊ ဒီဇင်ဘာနေ့တိုင်းမဟုတ်တောင် နေ့အတော်များများ နှင်းဖြူဖြူတွေကျဖို့ ကူညီပါ၊ ဆစ်ဒနီမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်မ အချစ်ဆုံးအကို ရရလဲ မြန်မာပြည်နှစ်တိုင်းပြန်လည်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါ၊ သူလိုချင်သမျှ ပစ္စည်းဆန်းဆန်း မှန်သမျှဝယ်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ပါ၊ သီချင်းအဆိုကောင်းတဲ့ ရရစိတ်ကြိုက်သီချင်းတွေ သူ့ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုလေးမှာဆိုပြီး တပြုံးပြုံးနဲ့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေနိုင်ဖို့လဲ စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ သူ့စိတ်ကြိုက် ခပ်လန်လန်ဒီဇိုင်းနဲ့ အမြဲ ပျော်ရွှင်နေနိုင်အောင်ကြည့်ရှုပါ၊ သူ့မိသားစုလေး အမြဲပျော်ရွှင်ပြီး ကမ်းခြေတွေမှာ အနားယူနိုင်ဖို့ ကူညီပါ၊
ဘယ်တော့မှ ငြိမ်ငြိမ်မနေ၊ တခုခု အလုပ်လုပ်နေတတ်တဲ့ ကျွန်မအမျိုးသားရဲ့ မာမာနဲ့တာတာလဲ သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်နေနိုင်အောင် ကျန်းမာစေဖို့စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ တူလေး ဖိုးလပြည့်လဲ ထူးချွန်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့စောင့်ရှောက်ပါ၊ ကျွန်မအမျိုးသားရဲ့တူလေး အဲလက်စ်ကိုလဲ သူ့မေမေက သိပ်မဆူပဲ သူဆော့ချင်သမျှ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ချင်သမျှ လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ ကူညီပေးပါ၊
ပြီးတော့ တာတာ့သူငယ်ချင်းကိုစောင့်ရှောက်ပါ၊ သူက brain stroke ၂ခါ ရထားပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ရှာဘူး၊ ကျွန်မတို့သွားလည်ရင် တွေ့တွေ့ချင်း ငိုသံပါပါလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနှုတ်ဆက်တတ်ပြီး ပြန်တဲ့အခါမှာလည်း မျက်ရည်လည် ငိုသံပါကြီးနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကျန်တတ်လို့ သူ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါ၊ သူ့ရဲ့ အမျိုးသမီးလည်း အရေပြားကင်ဆာက ကင်းလွတ်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊ သဘောကောင်းလှတဲ့ တာတာ့သူငယ်ချင်းနဲ့သူ့ အမျိုးသမီး ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ စောင့်ရှောက်ပေးပါ၊
ချစ်ရတဲ့ စန်တာ ဒီဇင်ဘာမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊
စန်တာကလောစ့်ဆီ စာရေးချင်ရင် လိပ်စာတွေက
• Santa Claus, North Pole, Canada, H0H 0H0
• Santa/Father Christmas, Santa’s Grotto, Reindeerland, SAN TA1
• Father Christmas, North Pole, SAN TA1
• Santa Claus, Santa Claus Village, FIN-96930 Arctic Circle, Finland.
စန်တာကလောစ့်အကြောင်းပိုပြီးစပ်စုချင်ရင်တော့ အဲဒီမှာ http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus ဖတ်ကြည့်ပါ၊
ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးဆီ စာရေးကြတဲ့ အလေ့အထက ကလေးတွေအတွက် ခရစ်စမတ်ထုံးထမ်းစဉ်လာလို ဖြစ်နေခဲ့တာကြာပါပြီ၊ ကလေးတွေစန်တာဆီရေးကြတဲ့ စာတွေမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့ အရုပ်တွေကို စန်တာဆီစာရေးတောင်းကြပါတယ်၊ လိမ်မာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုချစ်တဲ့ စန်တာဆီ သူတို့ဟာ မိဘစကားနားထောင်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုကြပြီး အရုပ်ကလေးတွေတောင်းတတ်ကြတယ်၊ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက်စာကိုပိုရှည်ရှည်ရေးသားပြီး ပိုမိုယဉ်ကျေးစွာ ရေးသားကြတယ်လို့ဆိုတယ်၊ မိန်းကလေးတွေက သူများတွေအတွက် တောင်းဆိုပေးတတ်ကြတယ်၊ စာတိုက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တခြား volunteer တွေက ကလေးငယ်တွေရဲ့စာကို ပြန်စာရေးပေးကြတယ်၊ ကျွန်မက ကလေးငယ်လေးမဟုတ်တော့ စန်တာက ကျွန်မရဲ့စာကိုဖတ်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး၊ လူတိုင်းလူတိုင်း၊ လူကြီးတိုင်း ကလေးတိုင်း သူတို့လိုချင်တာတွေ စာရွက်ပေါ်ချရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ပေါ့ပါးသွားတတ်ကြပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ခရစ်စမတ်မှာ အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ။
Eminem *Mocking Bird*
2:04 AM ဘာသာပြန်သီချင်း, အမ်မီနမ်ရဲ့ တေးဆိုတဲ့ငှက် No comments
ကျွန်မ သိပ်ကြိုက်တဲ့ Eminem ရဲ့ Mockingbird ဆိုတဲ့ ရက်ပ်သီချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
အဲဒီသီချင်းကို ပထမဆုံးနားထောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ခုချိန်ထိ ဘယ်အချိန်နားထောင်၊ နားထောင် ကြိုက်နေတုန်းပါပဲ။ ရက်ပ်စစ်စစ်ကြီးတွေ နားထောင်လို့မရပေမဲ့ ဒီလူတွေရဲ့ ဂီတက လျှော့တွက်လို့မရလှဘူး။ အမ်မီနမ်ရဲ့ သီချင်းစာသားတွေ လိုက်ဆိုကြည့်မိတဲ့သူတွေ ဒီပိုစ့်ဖတ်မိတဲ့သူထဲမှာပါရင် အသေအချာ နားလည်မှာပါ။ ဘယ်အချိန်အသက်ခိုးပြီး ရှုသွားလိုက်မှန်းမသိနိုင်လောက်အောင်ကို ဆိုသွားတာများ အင်မတန်ပါးပါးနပ်နပ်ရှိလှတဲ့ ရက်ပ်သမားတွေပါပဲ။ ကျွန်မ ဂီတကို တိတိကျကျကြီး နားမလည်လှပါဘူး။
Mockingbird ကိုတော့ အတီးစ၀င်လာတာကနေ စပြီးကြိုက်တာ။ အတီးကိုစကြိုက်ပြီးစာသားတွေဖတ်ကြည့်တော့ တော်တော်သဘောကျသွားတာနဲ့ပဲ။
Mockingbird အကြောင်း ဟိုဟိုဒီဒီမွှေနှောက်မိတာလေး လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ် ...
Mockingbird ဆိုတာ အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ တေးဆိုငှက်တစ်မျိုးဆိုပဲ။
ဒီငှက်က တခြားငှက်တွေရဲ့ အသံမျိုးတုပပြီးလိုက်ဆိုတတ်တယ်တဲ့။
ဒါနဲပဲ သူ့ကို ပြောင်ချော်ချော်ငှက်လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်မှာ။
Mockingbird သီချင်းဟာ အမ်မီနမ် ရဲ့ Encore အယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
US Music Chart မှာ နံပါတ် 11၊ UK မှာတော့ နံပါတ်4အဆင့်ရောက်ခဲ့ပြီး၊
Best Rap Solo Performance အတွက် ဂရမ်မီဆုဇကာတင်အဆင့်ရွေးချယ်ခံရတယ်။
ဒါပေမဲ့ Kanye West ရဲ့ Gold Digger ကိုတော့မကျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီသီချင်းဟာ အမ်မီနမ်က သမီးလေး ဟေလီဂျိတ်ဒ်ကို ရှင်းလင်းပြောပြနေဟန်ဆိုထားတာပါ။
ဟေလီရဲ့မေမေ ကင်မ်မက်သားစ်နဲ့ အမ်မီနမ်တို့ ရုန်းကန်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလဲငြီးတွားထားသေးတယ်။
သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးမှာအမ်မီနမ်ရဲ့ ဗရုတ်သုတ်ခ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘ၀ကိုဆက်တိုက်ပြောနေခဲ့တယ်။
ကင်မ်ကလဲ အဝေးကိုထွက်သွားလိုက်ပြီ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အမ်မီနမ်က
သမီးလေးဟေလီကိုပြောတယ်။ “ဒက်ဒီ ရောက်နေပြီပဲ အားလုံးကောင်းသွားတော့မှာပါ”တဲ့
သီချင်းထဲမှာ သမီးလေးလိုချစ်တဲ့တူမလေး အယ်လီနာကိုလဲ စကားတွေပြောထားပါသေးတယ်။
ဗီဒီယိုမှာတော့ ဟေလီနဲ့လိုင်နီတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကို ခပ်ဝါးဝါးလုပ်ထားတယ်။
အမ်မီနမ်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုချပြထားတဲ့ သီချင်းပါ။
အမ်မီနမ်ကတော့ ယောင်ဝါးဝါးလုပ် ငြင်းဆိုချင်ဟန်နဲ့ “ဒါ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ” လို့ဆိုတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီသီချင်းဆိုရင်း ငိုကြွေးခဲ့ရတာတော့ ၀န်ခံထားတယ်။
သီချင်းဆုံးခါနီးမှာ Don’t F--- with Dad လို့ဆိုထားပေမဲ့ Mockingbird single ခွေမှာ Parental Advisory Sticker ကပ်မထားပါဘူး။ သီချင်းအဆုံးမှာဖြစ်တာရယ်၊ တခြားအမ်မီနမ်ရဲ့သီချင်းတွေမှာ အဲဒီစကားလုံးတွေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပါတတ်တာကြောင့် ဒီသီချင်းကိုတော့ Recording Industry Association of America (RIAA)က ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(Parental Advisory sticker ဟာ US မှာ သီချင်း-အရုပ်/အသံတွေမှာညစ်ညမ်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံးတွေပါလာရင် ဒီစာတမ်းကိုကပ်ရပါတယ်။)
စစ်သားငယ်လေးရယ် ကျောကိုဆန့်ဆန့်မတ်မတ်ထားရင်း၊ သမီးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုလဲ ခပ်မဲ့မဲ့ကွေးညွှတ်မနေပဲ တင်းတင်းစေ့ထားပေးပါ။ ဘာကြောင့်ငိုနေမှာတဲ့လဲ။
ဒက်ဒီ မင်းအနားမှာရှိနေပြီပဲ။ ဟေလီ... ဒက်ဒီသိတာပေါ့၊ မင်းရဲ့မေမေကို လွမ်းနေမယ်။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီ့ကိုလဲ လွမ်းနေမှာ ဒက်ဒီသိတာပေါ့။
သမီးပြုံးနေတဲ့အချိန်၊ ရီမောနေတဲ့အချိန်မှာတောင် စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်နေမှာ
ဒက်ဒီသိနေ၊ မြင်နေနိုင်တယ်။ သမီးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲ ဒက်ဒီကြည့်ရင်း အတွင်းစိတ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတစ်နေရာမှာ သမီး ငိုချင်နေတယ်ဆိုတာ ဒက်ဒီမြင်နေနိုင်ပါတယ်။ သမီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒက်ဒီရှိမနေနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ကဲ ထပ်ထပ်ပြီး ငိုမနေပါနဲ့တော့၊ မျက်ရည်တွေကိုသုတ်လိုက်ပါတော့၊ ဒက်ဒီ မင်းအနားကို ခုရောက်လာပြီ၊
အိမ်မက်ဆိုးတွေနောက်ထပ်ရှိမလာနိုင်တော့ဘူး၊ ဒက်ဒီတို့ အတူတူ ဒါတွေကိုကျော်ဖြတ်ကြမယ်ကွဲ့။
လိုင်နီ အန်ကယ်က အရူးပဲမဟုတ်လား၊ ရူးတယ်ပဲထားပါဦး မင်းကိုလဲ သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ရေရေလည်လည် နားလည်သဘောပေါက်ထားရမယ်။
ကမ္ဘာကြီးလှုပ်ခါနေသလို ဒက်ဒီတို့ဘ၀တွေဟာလဲ ရီဝေယိမ်းထိုးနေရတာပါပဲ။ ဒါတွေက သမီးတို့ကို နားရှုပ်စေမှာ ဒက်ဒီသိတယ်။ ဒက်ဒီက အမြဲလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတယ်၊ မင်းတို့ မာမီကလဲ သတင်းတွေပဲ ထိုင်စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ သမီးတို့ကို အရိပ်ကောင်းကောင်း အုပ်မိုးပေးဖို့ကြိုးစားလိုက်တိုင်း ပိုပိုပြီး လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲလာတာချည်းပဲ။ ဒက်ဒီ့ရဲ့ ခုလို ကို့ရို့ကားယားပုံပမ်းမကျနတဲ့ ဘ၀ကို သမီးတို့ကို မမြင်မတွေ့စေချင်ပါဘူး။ ခုတော့ မရှောင်နိုင်ပါဘူး၊ မင်းတို့ရဲ့ မာမီနဲ့ဒက်ဒီတို့အခြေအနေတွေ
ပိုပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေပြီ။ ဒက်ဒီတို့က ဆယ်ကျော်သက်တွေလို ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ကြတာကို
သမီးတို့ မြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီ။ အရာရာတိုင်းဟာ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်
ဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး အိပ်လိုက်ကြပါဦး၊ တနေ့တော့ ဒက်ဒီတို့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ကြမှာပါ။ အဲဒီနေ့ကျရင် ဒါဟာ အိမ်မက်တွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ သမီးလေးရေ၊ တိတ်တိတ်လေး မငိုကြွေးပါနဲ့တော့၊
ခုတော့ မာမီ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဒက်ဒီတို့ မသိကြဘူးမဟုတ်လား၊
ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့သမီးအလှလေးရေ- ဒက်ဒီ ကတိပေးနိုင်တယ်ကွဲ့၊
ပြန်သတိရမိပါသေးရဲ့ တနှစ်ကပေါ့၊ ဒက်ဒီ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး။ ခရစ်စမတ်ကာလဆိုတော့ မာမီက ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို သစ်ပင်မှာ သူ့ဘာသာချိတ်ဆွဲရင်း ဒက်ဒီပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒက်ဒီကတော့ တကယ့်ကို ဘာဆိုဘာမှ မ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီ ခရစ်စမတ်ကို ဒက်ဒီမမေ့ဘူး၊ ဒက်ဒီ က တေလေကြမ်းပိုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ ခံစားနေရပြီး အဲဒီသစ်ပင်ရှေ့ တညလုံးထိုင်ငိုနေခဲ့ရတယ်။ ဒက်ဒီ့မှာ အလုပ်တော့ရှိပါရဲ့၊ အဲဒီအလုပ်က သမီးနဲ့မာမီ စားဖို့ဟင်းလျာတွေ စားပွဲပေါ်တင်ပေးရတဲ့အလုပ်ပဲ မဟုတ်လား၊
အဲဒီအချိန် ဒက်ဒီတို့ရဲ့အိမ်တွေက မလုံခြုံတော့ တံခါးတွေရိုက်ချိုးပြီး လုယက်မဲ့သူတွေ ကျူးကျော်လာကြပါလေရော၊ သမီးရဲ့မာမီက ကရားကို ၀က်ရုပ်စုဗူးလုပ်လို့ ပိုက်ဆံတွေစုထားတယ်။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေဟာ သမီးကြီးလာရင် ကောလိပ်ပို့မဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ ဒေါ်လာတစ်ထောင်ခန့်ရှိမယ်၊ လူဆိုးတွေက အားလုံးယူသွားကြတယ်၊ ဒက်ဒီသိပါတယ်။
အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ဟာ မာမီ့ကို စူးစူးနစ်နစ် ထိခိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး မာမီနဲ့ ဒက်ဒီ ဝေးကွာဖို့ စတင်လာခဲ့ကြတာပါပဲ။ မာမီနဲ့ ဒက်ဒီတို့ တချိန်လုံး ကတောက်ကဆ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ သမီးရဲ့မာမီက Chalmers က အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပဲပါတဲ့ တိုက်ခန်းကို ပြောင်းနေသလို ဒက်ဒီကလဲ မာမီနဲ့ဝေးရာ တခြားတစ်နေရာဆီ Novora က 8 Mile ဆီ ဒက်ဒီ ထွက်သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဒက်ဒီရဲ့ CD ကိုယူပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုသွားတယ်။ Dr.Dre နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်တယ်။
မာမီနဲ့သမီး ဒက်ဒီ့ကိုတွေဖို့လိုက်လာကြတယ်ဆိုတာဒက်ဒီသိတယ်၊ ဒက်ဒီအလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ်၊ အဲဒီတော့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ဒက်ဒီ့ကို မာမီကစွန့်ခွာခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သမီး ဒက်ဒီ့ကို TV မှာ ဘွားကနဲမြင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လား၊
ဒက်ဒီက လိမ့်နေတဲ့ဂေါ်လီတစ်လုံးလိုပဲ၊ မာမီကလဲ ဒက်ဒီနဲ့ဝေးကွာစေမယ့် အကြောင်းတရားတွေပဲ စိတ်အာရုံမှာ တချိန်လုံး မွေးမြူနေတော့တယ်။
ဒက်ဒီ အလုပ်နဲ့သက်သေပြဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ပထမဆုံးလက်တစ်ဖက်ကို လက်လွှတ်မခံနိုင်ဘူး၊
သမီး ငယ်ငယ်က ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း သမီး ဘယ်လောက်တောင်ကြီးပြင်းလာပြီလဲဆိုတာ မြင်ချင်လှပါပြီ၊ သမီးတို့ဟာ ညီအမတွေလိုဖြစ်နေကြပြီလား၊ မှန်းဆကြည့်လိုက်ပါရစေဦး။
လိုင်နီ မင်းကိုလဲ ပြောချင်ပါရဲ့ ဒက်ဒီ မင်းတို့အနားရောက်လာခဲ့ပြီ ကွဲ့။
စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်း သမီးအတွက် ၀ယ်ပေးဦးမယ်၊
သီချင်းတစ်ပုဒ်လဲ သမီးအတွက် ဆိုပြပါရစေဦး၊
အဲဒီလက်စွပ်က စိန်ပွင့်လေး တလက်လက်တောက်ပမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်-
ပြီးတော့ ရတနာဆိုင်ကိုလဲ ပြန်သွားပြီး ခပ်မွဲမွဲလက်စွပ်ရောင်းလိုက်တဲ့လူကို
ရွှေချိန်တွေပဲ တချိန်လုံးမဆန့်မပြဲ ဆက်ပြီးဝါးမျိုနေဖို့ တစ်ခုခု လုပ်ပစ်ခဲ့မယ်ကွဲ့။
ဟား ဟား ဒက်ဒီ့ကို လာမညိလိုက်ပါနဲ့။ ။
12:52 AM နံရံဆေးခြယ်အနုပညာ သို့မဟုတ် Graffiti Art, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး 1 comment
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂီတအဖွဲ့အတော်များများဟာ လူငယ်များဖြစ်တဲ့အတိုင်း လူငယ်ထုရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးတွေကို Active Painting အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ abstract, expressionism ပန်းချီရေးဟန်တွေရဲ့အောက်မှာ ပုံစံပြောင်း၊ ချုံ့ယူပြီး သရုပ်ဖော်ခွင့်ရတဲ့အတွက် Graffiti Art ဟာ မြန်မာလူငယ်ထုရဲ့ အနုပညာနှလုံးသားအတွင်း ကိန်းဝပ်နေခဲ့ပါပြီ။ အခုအခါ Live Show စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတချို့ရဲ့ background တွေမှာ Graffiti Art နဲ့ stage design ပြင်ဆင်မွမ်းမံလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
တကယ်တော့ Graffiti ဆိုတာ နံရံတွေပေါ်မှာ လက်ဆော့ပြီး ရေးခြစ်လိုက်တဲ့ ပုံတွေကိုခေါ်တာပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒါဟာ ခေတ်ပေါ်အရပ်သုံးစကားဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ခြုံငုံသိရှိနိုင်ခြင်းလို့လည်း အဓိပ္ပါယ်တွင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်ရာမှာ မိမိရဲ့ အမည်ကို လူသိများအောင် နံရံများ၊ ကားများ၊ ရထားများ၊ မိမိတို့ရဲ့ အသုံးအဆောင်၊ ဦးထုပ်အင်္ကျီများမှာ ဆေးဘူးနဲ့ဖြန်းပက်ပြီး ဒီဇိုင်းဆင် ဖန်တီးရာကနေ Graffiti Art ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားသိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ `ဘာဘူ´ ဆိုတဲ့ ဂီတသမားလူငယ်လေးက သူ့ရဲ့ `ပြိုင်ဘက်´ ဗီစီဒီမှာ Graffiti Art ကို အသုံးပြုလိုက်တာဟာ တနည်းအားဖြင့် သူ့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်မှု ဂီတစွမ်းပကားကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Graffiti Art လို့ အမည်ရတဲ့ မှုတ်ဆေးဘူးတွေနဲ့ လက်တန်းပုံဖော်ရတဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်ဟာ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်
၀န်းကျင်လောက်က New York မှာ စတင်ခေတ်စားလာတဲ့ အနုပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျယ်ပြောတဲ့ မြင်ကွင်းတွေရယ် မိမိစိတ်အတွင်းက ခံစားမှုအစုစုရယ်ကို ပေါင်းစပ်ပြီး သီးခြားအနုပညာလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် ချုံ့ယူ၊ ပုံပြောင်းယူလိုက်တဲ့အခါ Graffiti Art ရယ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်ပန်းချီရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုရှိပေမယ့် ဖန်တီးသူတွေရဲ့ အိုင်ဒီယာဆန်းသစ်မှု၊ မှုတ်ဆေးဘူးကိုင်တွယ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပါးနပ်မှု စတာတွေကြောင့် သီးခြားအနုပညာအမည်နာမတစ်ခုနဲ့ ယနေ့ထိရေရှည် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ The New York Times သတင်းစာကနေ စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းဖော်ပြရတဲ့အထိ ဆေးခြယ်မှု အနုပညာမှာ စိတ်ကူးကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ Graffiti Art ရဲ့ ခေတ်ဦးအနုပညာရှင်ကတော့ Taki 183 ပါ။ အမည်ရင်း Demetrius ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး Taki 183 ဟာ မြေအောက်ရထားလမ်းတွေရဲ့ နံရံတွေမှာ ဆေးရောင်စုံခြယ်နေခဲ့ခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့အနုပညာ အစပျိုးခဲ့ပါတယ်။ Taki နဲ့ ခေတ်ပြိုင် နာမည်ကျော်သူတွေကတော့ Joe 136, Barbara 62, Eel 159, Ank 135 နဲ့ Eva 62 တို့ပါပဲ။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာမည်၊ လက်မှတ်နဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို ပုံသဏ္ဍာန် ဆန်းဆန်းပြားပြား၊ ဆေးရောင်လှလှတွေနဲ့ ဆေးခြယ်မှုန်းတဲ့ကိစ္စဟာ နည်းစနစ်တွေနဲ့ အတိအကျ ရေးဆွဲရခြင်းမဟုတ်လို့ လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်စရာရှိပေမယ့် တကယ်တော့ ထင်သလောက် မလွယ်ပါဘူး။ Graffiti Art ဟာ ဘယ်အနုပညာလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လျင်မြန်ထိရောက်စွာ ဖွဲ့နွဲ့ပြီး၊ လူသိများ ကျော်ကြားစေတဲ့အတွက် အနုပညာလောကသားတွေ အထူးသဖြင့် လူငယ်အများစုက ဒီ Art ကို အင်မတန် သဘောကျလာခဲ့တာဗျ” ဒါကတော့ The New York Times သတင်းစာပါ အင်တာဗျုး ဆောင်းပါးထဲက ဖန်တီးရှင် Taki 183 ရဲ့ စကားတွေပါ။
၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ Lee Quinones ဟာ သူ့ရဲ့ အနီးဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်မှာ ခြယ်မှုန်းရေးဆွဲနေခဲ့ရာက ဘရွတ်ကလင်းတံတား (Brooklym Bridge) အနီးတ၀ိုက်မှာလည်း စိတ်တိုင်းကျ ခြယ်မှုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Baseball ကစားကွင်းရဲ့နံရံတွေမှာလည်း ညစဉ် မအိပ်မနေရေးဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ Graffiti Art ကို ၀ါသနာထုံသူ Fab5Freddy ကလည်း Village Voice သတင်းစာမှာ ‘အသွင်ပြောင်းရေးဆွဲမှု အနုပညာ’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ Graffiti Art အကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အားထုတ်မှုကို သိရှိသွားတဲ့ ရောမမြို့ Medusa ပြတိုက်ပိုင်ရှင် Claudio Brunt ဟာ Lee နဲက Fred တို့ရဲ့ လက်ရာတွေကို သူ့ရဲ့ ပြခန်းမှာ ပထမဆုံး ပြသစေခဲ့တယ်။ အဲဒီလို အနုပညာတစ်ရပ်အသွင် ချီးမြှင့်ပြသလိုက်တဲ့အတွက် ဒီ Graffiti Art ဟာ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ Graffiti ဟာ နံရံဆေးရေးပန်းချီ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာလွတ် ရှားပါးလာခြင်း အခက်အခဲတွေကြောင့် ရှေးရိုး ရေးစဉ်ရေးနည်းကနေ အနည်းငယ်သွေဖည်ပြီး ငွေကြေးပိုမို ဖြုန်းတီးရတဲ့ အနုပညာအသွင် ဖန်တီးရဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်စာလုံးတွေကို ပိုမိုပေါ်လွင်အောင် outline ခပ်ထူထူနဲ့ ဆေးများများသုံးပြီး ဆန်းသစ်ခြယ်မှုန်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ Graffiti ပုံစံသစ်ကို ‘Piece’ လို့ ကင်ပွန်းတပ်ကြပြန်ပါတယ်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ အကောင်းဆုံး Garaffiti Art ခြယ်မှုန်းနိူင်သူကို The New York Times သတင်းစာကနေ လျှောက်လွှာခေါ်ယူ ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကတော့ စိတ်ကူးဆန်းပြားတဲ့ Graffiti အနုပညာရှင်တွေ များပြားစွာ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းပါပဲ။ Graffiti Art ဟာ တဖြည်းဖြည်း ပျံ့နှံ့လာပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာတော့ ရထားတစ်စင်းလုံးကို ဆေးခြယ်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ Caine 1 နဲ့ Fabulous Five အဖွဲ့တို့ဟာ နာမည်ကျော် နံရံဆေးမှုန်းပညာရှင်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ Graffiti Art ကို ရူးသွပ်လာခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ဖန်တီးခြယ်မှုန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရင်းနဲ့ အမည်စာလုံးများ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပူးကပ်ခြယ်မှုန်းရာမှာ Fullstop (.) နဲ့ Comma(,) တွေ ပါဝင်လာမှုကြောင့် အခက်အခဲ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံကြရပြန်ပါတယ်။ ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Phase2ဟာ သူ့ရဲ့ လက်ရာတွေမှာ (.) နဲ့ (,) တွေအစား arrow ကဲ့သို့ ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္ဍာန်များနဲ့ ထည့်သွင်းခြယ်မှုန်းခြင်းအားဖြင့် စာလုံးတွေ ရှည်လျားအောင်ရေးဖို့ မလိုတော့ဘဲ အလွယ်တကူ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပြီး အဲဒီနည်းလမ်းအသစ်ကိုတော့ Wild Style လို့ အမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။ Graffiti Art ကို Style အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖန်တီးခြယ်မှုန်းရာမှာ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ခေတ်ဦးလူငယ်တွေကတော Hondo, Dead Leg နဲ့ Phase2တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုး ပန်းချီကား စုဆောင်း၊ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဟာ New York ကိုရောက်ရှိလာပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ Graffiti Art ဆေးခြယ်မှုန်းသူ လူငယ်များကို ရှာဖွေစုစည်းခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Graffiti Art ဆိုတဲ့ လူငယ်ထုအတွင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်ကို ပြည်သူလူထုအတွင်း အရှိန်အဟုန်ကြီးစွာ ပျံ့နှံ့စေဖို့ပါပဲ။ ဥရောပ ဈေးကွက်အတွင်း ခင်းကျင်းချပြမယ်လို့လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ Fashion Moda, The Mudd Club, The New Wave Show နဲ့ The Sun Gallery တို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခြယ်မှုန်းပြသခဲ့တဲ့ Graffiti ဖန်တီးရှင်များကတော့ Dondi, Crash, Ramellzee, Zephyr, Futura 2000, Quik, Lady Pink, Seen, Blade နဲ့ Bil Blast တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်လေးတွေကို စုစည်းပြီး Museum Boymans Van Beuningen မှာ Graffiti Art လက်ရာသက်သက်ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တယ်။
“Graffiti Art” ဟာ ပန်းချီမဟုတ်ပါဘူး၊ အရူးအနှမ်းလူငယ်လေးတွေရဲ့ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ လက်ရာတွေပဲဗျာ” လို့ ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုဖူးတဲ့ ပန်းချီဝေဖန်ရေးသမားတွေဟာ အဲဒီပြပွဲကို ကြည့်ရှုအပြီးမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ပါးစပ်တွေ ဟောင်းလောင်းပွင့်ကျသွားတဲ့အထိ ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ ပန်းချီကား ၀ယ်ယူစုဆောင်းသူတွေဆီကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ အံ့ဘနန်းညံစီလာပါတယ်။ Graffiti Art ဟာ ခုဆိုရင် ပန်းချီကားလောကမှာ နံရံ ဆေးခြယ်အနုပညာအဖြစ် နေရာတစ်နေရာခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိခဲ့ပါပြီ။ နေရာရလာတာနဲ့အမျှ Graffiti Art ပညာရှင်များဟာလည်း အုပ်စုနှစ်စု ကွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမအုပ်စုကတော့ အနုပညာစစ်စစ်ကို နည်းပညာပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တီထွင်ရေးခြယ် ဖန်တီးလိုသူများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ Artwork တွေကို ဈေးကွက်ရှာ ရောင်းချနိုင်ဖို့ အခါအခွင့်မျှော်ကိုးနေကြသူများဖြစ်ပြီး အဲဒီလို ဈေးကွက်ဝင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူပညာရှင်များအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ လက်မထောင် ၀င့်ကြွားလိုသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအုပ်စုကတော့ နည်းပညာအသစ်နဲ့ ဈေးကွက်ဝင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ နံရံတွေပေါ်မှာ ရှေးနည်းဟောင်းအတိုင်း ဆေးခြယ်မှုန်းဖို့ အမြဲတစေ ချဉ်းကပ် အားထုတ်နေကြသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ Artwork တွေကို ဈေးကွက်တင်ရောင်းချဖို့၊ ပြတိုက်တွေမှာ ခမ်းနားစွာခင်းကျင်းပြသဖို့ ဘာဆိုဘာမှ စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။
ဒါကိုပဲ ပြည်သူလူထုရဲ့ ၀ိညာဉ်နှလုံးသားနဲ့ ထာဝရနီးစပ်မှုရှိနေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာစစ်စစ် နံရံဆေးခြယ် အနုပညာပဲဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြလေမလား။
အနာဂတ် Graffiti Art
မြန်မာပြည်က လူငယ်ဂီတအဖွဲ့တွေဟာ အခုအခါသူတို့ရဲ့ ဗီစီဒီတွေမှာ Graffiti Art များ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးဖို့ အားသန်နေကြတာကြောင့် မှုတ်ဆေးဘူးသုံး၍ ပန်းချီရေးဆွဲမှု ကျွမ်းကျင်သူဖန်တီးရှင်များ ဈေးကွက်ပိုမိုရရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ ဂီတစင်မြင့်ပွဲတွေရဲ့ Stage Decoration တွေမှာ လူငယ်များရဲ့ Graffiti Artwork များက ဈေးကွက်ဝေစု သိမ်းယူလာဖွယ်ရှိကြောင်း ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူ တေးထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Ref: Internet, 2005 April Living Color Magazine
အမှတ် ၁၁ ၊ ၂၀၀၅ ဇူလိုင်လ
5:03 AM ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မိသားစုဆိုတာ ဘုရားကျောင်းလေးတစ်ခုပါ 1 comment
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်သူ အော်သိုဒေါစ့်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်ပါဗလဲ(Patriarch Pavle)ရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀
အော်သိုဒေါစ့်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်ပါဗလဲ ရဲ့ အမည်ရင်းက ဂေါ့ရ်ကောစတောရ်ချဲဗစ်ခ်ျ(Gojko Stojčević) ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ ဒွန်ရီမီဟိုလ်ရက်စ်(Donji Miholjac)အနီး ကူချန်စီ(kućanci) မြို့လေးမှာ ၁၉၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်တည်းက မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပြီး အဒေါ်ကစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်၊ နောက်တော့ ဆာရာရေဗိုမြို့၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးတက္ကသိုလ်မှာ ပညာဆက်သင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း အနောက်မိုရာဗာမြစ် (West Morava) ဒေသက တောင်ကြားလေးမှာရှိတဲ့ အော့ဗ်ချာမြို့က Holy Trinity ဘုရားကျောင်းမှာသွာရောက်ခိုလှုံနေခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကြီးအပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအဖြစ်လဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၄ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ တီဘီအဆုတ်နာရောဂါဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး ဗူရန်န်(Vujan)ဘုရားကျောင်းရှိ Saint ရုပ်ကလာဂ် ရှေ့မှာ ၂နှစ်ကျော်ကြာ ဘုရားသခင်ထံ နေ့စဉ်ဆုတောင်းပြီး ရောဂါကိုကုသခဲ့တယ်၊ အဲဒီခေတ်က ကပ်ရောဂါလိုဖြစ်နေတဲ့ တီဘီအဆုတ်နာရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်၊ ၁၉၄၆မှာတော့ အော့ဗ်ချာက ဘလာဂိုဗဲရှတန်းရဲဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သိက္ခာတော်ခံယူခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးအမည်က ပါဗလဲ(Pavle) အင်္ဂလိပ်အမည် Paul ပါ။ ဗျာဒိတ်တော်အရ ဘုန်းကြီး hierodeacon ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ (လက်ထပ်ခြင်းမရှိ၊ ၀တ်ရုံတော် အနက်ဝတ် ဘုန်းကြီး(monk) ပါ၊ hierodeacon နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကုန်နားမလည်နိုင်သေးပါဘူး၊ လေ့လာဆဲမို့ လွဲမှားတာရှိရင်နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်)၊ ၁၉၄၉-၁၉၅၅ ခုနှစ်အတွင်း ရာချာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်(Bishop)တွေရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၅၇မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၅၅နဲ့ ၁၉၅၇ခုနှစ်မှာ ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့မှာ ဘွဲ့လွန်ပညာဆက်သင်ခဲ့တယ်၊ ဂရိက ပြန်လာပြီးတဲ့အခါ ကိုဆိုဗိုဒေသအားလုံးအပါအ၀င် ရာစ့်နဲ့ ပရီဇ့်ရန်း (Ras and Prizren)ဒေသတွေရဲ့ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်(Patriarch) မဖြစ်ခင် ၃၃နှစ်ကြာ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ငယ်ငယ်တည်းက မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပြီး အဒေါ်ကစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်၊ နောက်တော့ ဆာရာရေဗိုမြို့၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးတက္ကသိုလ်မှာ ပညာဆက်သင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း အနောက်မိုရာဗာမြစ် (West Morava) ဒေသက တောင်ကြားလေးမှာရှိတဲ့ အော့ဗ်ချာမြို့က Holy Trinity ဘုရားကျောင်းမှာသွာရောက်ခိုလှုံနေခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကြီးအပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအဖြစ်လဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၄ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ တီဘီအဆုတ်နာရောဂါဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီး ဗူရန်န်(Vujan)ဘုရားကျောင်းရှိ Saint ရုပ်ကလာဂ် ရှေ့မှာ ၂နှစ်ကျော်ကြာ ဘုရားသခင်ထံ နေ့စဉ်ဆုတောင်းပြီး ရောဂါကိုကုသခဲ့တယ်၊ အဲဒီခေတ်က ကပ်ရောဂါလိုဖြစ်နေတဲ့ တီဘီအဆုတ်နာရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်၊ ၁၉၄၆မှာတော့ အော့ဗ်ချာက ဘလာဂိုဗဲရှတန်းရဲဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သိက္ခာတော်ခံယူခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးအမည်က ပါဗလဲ(Pavle) အင်္ဂလိပ်အမည် Paul ပါ။ ဗျာဒိတ်တော်အရ ဘုန်းကြီး hierodeacon ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ (လက်ထပ်ခြင်းမရှိ၊ ၀တ်ရုံတော် အနက်ဝတ် ဘုန်းကြီး(monk) ပါ၊ hierodeacon နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကုန်နားမလည်နိုင်သေးပါဘူး၊ လေ့လာဆဲမို့ လွဲမှားတာရှိရင်နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်)၊ ၁၉၄၉-၁၉၅၅ ခုနှစ်အတွင်း ရာချာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်(Bishop)တွေရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၅၇မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၅၅နဲ့ ၁၉၅၇ခုနှစ်မှာ ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့မှာ ဘွဲ့လွန်ပညာဆက်သင်ခဲ့တယ်၊ ဂရိက ပြန်လာပြီးတဲ့အခါ ကိုဆိုဗိုဒေသအားလုံးအပါအ၀င် ရာစ့်နဲ့ ပရီဇ့်ရန်း (Ras and Prizren)ဒေသတွေရဲ့ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်(Patriarch) မဖြစ်ခင် ၃၃နှစ်ကြာ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရာစ့်နဲ့ ပရီဇ့်ရန်း (Ras and Prizren)ဒေသတွေရဲ့ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်အဖြစ်တာဝန်ယူစဉ် ဘုရားကျောင်းအသစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ဖို့၊ ဘုရားကျောင်းဟောင်းတွေပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ ကူညီခဲ့တယ်၊ သူ့ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများမှာ လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ခရီးတွေသွားလာခဲ့တယ်၊ စာတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်၊ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ကျမ်းစာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်၊ ကိုဆိုဗိုမှာ ၃၃နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀မှာ Patriarch of Serbia အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ ၁၉၉၀ ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့က စပြီး ဘဲလ်ဂရိတ် St.Michael's Cathedral ဘုရားကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်ခဲ့တယ်၊ ပါဗလဲရဲ့ မာန်မာနကင်းပြီး စိတ်သဘောထားနူးညံ့ပျော့ပြောင်းမှုဟာ သူ့ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ဂုဏ်ဒြပ်ပါပဲ၊ ဆားဘီးယန်းအော်သိုဒေါ့စ်ဘုရားကျောင်းက ဘုန်းကြီးတွေမှာ အဆင့်မြင့်ကားတွေရှိနေကြပေမဲ့ ပါဗလဲ မှာတော့မရှိပါဘူး၊ 'လမ်းလျှောက်သူတော်စင်'လို့နာမည်ကြီးပါတယ်၊ စစ်ပွဲတွေအတွင်း တစ်လျှောက်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်က လူတွေကြားထဲ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်သွားလာခဲ့ဖူးခြင်းမရှိတဲ့ ပါဗလဲ ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားမှာ ပါဗလဲကိုရိုသေချစ်ခင်ကြတဲ့ လူပေါင်း ၆သိန်းကျော်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ၃ ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဈာပန အခမ်အနားမှာ ဆားဘီးယား၊ မွန်တန်နီဂရိုး၊ ဘောစ့်စနီးယား ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ခရိုးအေးရှား၊ နဲ့ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံဆီက ပါဗလဲကိုချစ်တဲ့၊ ပါဗလဲက အမြဲချစ်ခင်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ကို စုရုံးရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဘဲလ်ဂရိတ်လမ်းတွေပေါ်မှာလူတွေ ပြည့်သိပ်နေခဲ့ပါတယ်၊
စိန့်ဆာဗာဘုရားကျောင်းရှေ့ ရင်ပြင်မှာ ရုပ်ကလာပ်ကို ခေတ္တရပ်နားပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်၊ ရိုမေနီးယား၊ ဂရိစ် ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းကြီး တွေက ဘာသာစကား ရိုမေနီးယား၊ ဂရိစ်ဘာသာတွေနဲ့ ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်၊ ဈာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဆားဘီးယားသမ္မတ ဘောရစ်တာဒစ် က ပါဗလဲ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကား "မေတ္တာဂရုဏာတရားပြည့်ဝကြဖို့၊ မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်ပူးကပ်နေတဲ့ သူများရဲ့ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကို လက်တုန့်ပြန်ခြင်း ဘယ်တော့မှ မပြုလုပ်ကြဖို့" ကို ပြန်လည်ချီးမြောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်။
သမ္မတတာဒစ်က အခုလို ပြောကြားခဲ့တယ်။ "ကြီးမြတ်လှတဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ပါဗလဲရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော် ပြန်လည်ချီးမွန်း ဖော်ပြသလို ပါဗလဲရဲ့ မေတ္တာတော်ကြီးမားလှတဲ့ လေးနက်တည်ကြည်တဲ့စကားလုံးတွေ တည်ရှိနေပြီးသား ဆားဘီးယန်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ သဘောထားကိုလဲ အားလုံးကို မျှဝေပေးလိုက်တာလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်"လို့ဆိုတယ်။
စိန့်ဆာဗာဘုရားကျောင်းကို တပတ်လှည့်လည်ကြတယ်၊ ခေါင်းလောင်းသံအေးအေး တချိန်လုံးတီးနေခဲ့ပါတယ်၊ ဘုရားကျောင်းဝတ်ပြုအဖွဲ့ကလဲ ချိုအေးလှတဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းတဲ့ သီချင်းတွေရွတ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ရင်ပြင်မှာ တပတ်လှည့်လည်ပြီးတဲ့အခါ ရုပ်ကလာပ်ကို မြို့ထဲ လမ်းမတလျှောက် သယ်ဆောင်ရင်း ပါဗလဲရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့စွန်နားက ရာကိုဗစ်ဆာဘုရားကျောင်းမှာ မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
“စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူတွေဟာ ခက်ခဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုက လွတ်မြောက်ဖို့၊ ကြံ့ကြံ့ခံဖို့ ခံနိုင်ရည်မရှိကြဘူး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားကြီးသူတွေကတော့ အမှန်တရားကို ဆုတ်ကိုင်ထားပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ရုန်းကန်နိုင်ကြတယ်”
“မကောင်းဆိုးဝါးဆန်တဲ့လူသားတွေကိုကာကွယ်သင့်တယ်၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးဂရုစိုက်ရမှာက ကိုယ်တိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးဆန်တဲ့သူ ဖြစ်မသွားဖို့ပါပဲ”
“ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ မုသား၊ တရားမဲ့မှု နဲ့ အမုန်းတရားတွေ ပမာဏအများကြီးရှိစေဦးတော့ အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကတော့ စွမ်းအားပိုကြီးမားပါတယ် ”
“ရန်သူတွေဖြစ်နေပါစေ၊ သင် ဘုရားသခင်ဆီမှာ သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါ၊ သူတို့ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်သိမြင်လာစေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါ”
“တခြားသူတွေဆီကလာတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဟာ သင့်ရဲ့အတွင်းသဏ္ဍန်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးလောက်ကုသရမခက်ပါဘူး”
“ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားစီရင်မနေပါနဲ့၊ နားလည်ဖို့သာ ကြိုးစားကြည့်ပါ”
“ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေရင်၊ ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလဲ ဝေးကွားနေကြမှာပါပဲ”
“ကျွန်တော် ဆားဘီးယားနိုင်ငံကို စစ်ပွဲအတွင်း မပျက်သုဉ်းဖို့ ဆာ့ဘ်တွေကို ဦးဆောင်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆားဘီးယားနိုင်ငံကြီးကို မပျက်ဆီးရလေအောင်ထိမ်းသိမ်းဖို့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ လိုအပ်မယ်ဆို၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံပျောက်သွားစေဦးတော့ ကျွန်တော်ငြင်းပါမယ်၊ ဆားဘီးယားဒေသသေးသေးလေး ကာကွယ်ဖို့ ရာဇ၀တ်မှုတွေလိုအပ်မယ်ဆို၊ ဒီဆားဘီးယားဒေသသေးသေးလေးအတွက်ပဲဖြစ်ပစေ၊ ကျွန်တော်ထပ်ပြီး ငြင်းဆန်ပါဦးမယ်၊ ဆာ့ဘ်တစ်ဦးချင်းဆီမှာ ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဖို့ ရာဇ၀တ်မှုလိုအပ်နေဦးမယ်ဆို ကျွန်တော်တို့အားလုံးပျောက်ဆုံးသွားပါစေ၊ ကျွန်တော် ဒါကို ထပ်ပြီး ငြင်းဆန်ရပါဦးမယ်”
ပါဗလဲ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်များ
Monograph on the monastery of Devic (၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့)
To be clearer to us some questions of our faith (၁၉၉၈ ခုနှစ်)
Prayers and requests (၁၉၉၈ခုနှစ်)
ပါဗလဲ ရဲ့ အလေ့အထ
တီဗီ၊ ရေဒီယိုအသုံးမပြုပါဘူး၊ သတင်းစာဖတ်လေ့ရှိတယ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်အသုံးပြုတယ်၊ ရှုးဖိနပ်၊ မှန်ချပ်၊ တံခါး စတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကအစ တကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းတွေ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သုံးစွဲတတ်တယ်၊ အခန်းတွေက ပြန်ထွက်တဲ့အခါ မီးလုံးတွေကို အမြဲပိတ်သွားလေ့ရှိတယ်၊ တတ်နိုင်သမျှ လမ်းလျှောက်သွားလေ့ရှိတယ်၊ စိစစ်ချွေတာသူဖြစ်ပေမဲ့ ကပ်စေးနည်းသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး၊ မီးဖိုဆောင်မှာ ချက်ပြုတ်ဖို့လဲ တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်တယ်၊ မနက်စောစောတွေမှာ လှေကားထစ်တွေဆေးကြောနေတတ်တဲ့ ပါဗလဲ ကို အလုပ်သမားတော်တော်များများမြင်ဖူးကြတယ်။ သူပြောတာက "လူသားတွေရဲ့တာဝန်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နေတာပါပဲ၊ ဘာမှ မခက်ပါဘူး၊ မဆန်းကြယ်ပါဘူး” တဲ့
တန်းဘိုးကြီးကားတွေကိုသူမလိုလားပါဘူး၊ တန်ဘိုးကြီးမှ မဟုတ် သူ့မှာ သာမန်ကားတစ်စီးတောင်မှ ရှိမနေပါဘူး၊ ဆေးလိပ်သောက်တာဆန့်ကျင်သူဖြစ်တယ်၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာလိုမှုအတွက် ဆန္ဒပြမှုတွေကိုမကြိုက်ပါဘူး၊ ပါဗလဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ ပါဗလဲကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ သူ့အတွက် ၀န်ပိနေမှာကို မလိုလားဘူး၊ ရှုးဖိနပ်ကိုယ်တိုင်ချုပ်၊ ဟင်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တတ်တယ်၊ ဆားဘီးယန်းအော်သိုဒေါစ့်ဘုရားကျောင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းတင်းကျပ်စွာ နေထိုင်လေ့ရှိပေမဲ့ နိုင်ငံသားတွေအပေါ် ပျော့ပြောင်းနူးညံ့စွာဆက်ဆံတယ်၊ အားလုံးကို ကြိုဆိုပြီး မာန်မာနမရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာတိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားသူ၊ ထူးခြားလှတဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက် ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်ပါဗလဲကို ဂုဏ်ယူစွာနှုတ်ဆက်ရင်း၊ ထာဝရဘုရားသခင်အတွက် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ သက်သေခံလိုက်ပါတယ်။
5:01 PM အက်ဆေး, နှင်းကျတဲ့နေ့က ကျွန်မ ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ် No comments
ကျွန်မလဲ ရေချိုး၊ ပြီး ကွန်ပျူတာဖွင့် အင်တာနက်ကြည့်၊ ဂျီတော့ခ်မှာ အားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင် စကားပြော၊ မေးလ် စစ်၊ ဘီဘီစီ၊စီအန်အန် ခေါင်းကြီးသတင်းတွေဟိုဟိုဒီဒီအပြေးဝင်ဖတ်၊ ခဏတော့ ကောင်းကင်ဖြူဖြူကြီးကိုမေ့လို့၊ နဲရှောကလဲ သူ့အဖေနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်လို့ သစ်သားဖြတ်စက်လေးနဲ့ ခုံလေးတွေ သူတို့ဘာသာလုပ်နေကြတယ်။ မာမား ကလဲ မီးဖိုခန်းထဲမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။
ခဏနေတော့ မာမားက နဲရှောကို ပြောသံကြားလိုက်တယ်၊ ကျွန်မ နာမည်ပါလို့ ကျွန်မကို တစ်ခုခုပြောခိုင်းမှန်းသိပေမဲ့ အခုထိ သူတို့စကားကို ကျွန်မနားမလည်နိုင်သေးပါဘူး၊ ခဏနေတော့ နဲရှောက အခန်းထဲဝင်လာပြီး “မာမားကပြောနေတယ်၊ ဖြိုးဖြိုးကို ပြတင်းပေါက်ဆီကြည့်ဖို့ သတိပေးလိုက်ပါဦးတဲ့” ကျွန်မလဲ ပြတင်းပေါက်ဆီကိုကြည့်လိုက်ရော ..
အိုး နှင်းစက်လေးတွေ .. တကယ်ပဲ မနက်က မိုးစက်သေးသေးလေးတွေက နှင်းစက်လေးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ၊
ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး အဖြူရောင်အစက်အပြောက်လေးတွေ ပြန့်ကျဲလို့နေတယ်၊ လေတိုက်နေတော့ သေးကွေးလွန်းတဲ့နှင်းစက်လေးတွေက ကောင်းကင်ကနေ ကျလာတာနဲ့မတူ၊ မြေကြီးပေါ်က ပျံတက်လာသလို ဦးတည်ရာမရှိ ဟိုဟိုဒီဒီပျံဝဲနေကြတယ်။ အဖြူရောင်ပိုးကောင်လေးတွေလို တစ်ခါတစ်ခါ နှင်းစက်လေးတွေက နှင်းချပ်လေးတွေလို အရွယ်ကြီးလာတတ်တယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ပြီးသေးကွေးသွားကြပြန်ရော၊ တံခါးကိုဆွဲအဖွင့် အေးစက်စက်လေ က မျက်နှာကိုလာတို့ထိ၊ “နဲရှောရေ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါဦး နှင်းစက်လေးတွေ” ကျွန်မ က ခပ်စူးစူးအော်ဟစ်နေသလို လက်တစ်ဖက်ကလဲ ပြတင်းအပြင်ဘက်ရောက်နေပြီ၊
သူက သိပ်အေးတယ် တံခါးမဖွင့်ပါနဲ့လို့ပြောနေပေမယ့် သူ ကျွန်မကိုဘယ်လိုမှ မတားနိုင်၊ လက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ကြည့်ဖို့ ကျွန်မက ကြိုးစားနေနှင့်ပြီ၊ လက်ထဲမှာတော့ နှင်းစက်လေးတွေ ကြာရှည်မနေ၊ ရေစက်လေးလိုပဲ ချက်ချင်းပျောက်သွားကြတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်တော့တယ်၊ အကျီ အထပ်ထပ်ဝတ်၊ နောက်ဆုံး နှင်းကာဂျာကင်ရှည်၊ ဖိနပ်ရှည်ကြီးဝတ် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ၊ နဲရှောလဲ ဘယ်လိုမှ မတားနိုင်၊ အပြေးအလွှား ကင်မရာအိတ်ဆွဲ အကျီထူထူကြီးတွေ အမြန်နှုန်းနဲ့ဝတ်ပြီး ကျွန်မနောက်က ခပ်သုတ်သုတ်လိုက်ရတော့တယ်။ အပြင်ရောက်တော့ နှင်းစက်လေးတွေက မျက်နှာကို ရိုက်ခတ်ပုံက စူးရှရှ၊ နှင်းစက်တွေနဲ့ အေးတဲ့ဒဏ်ကို အခုမှပဲကြုံဖူးတော့ ကျွန်မမှာ ခေါင်းကိုမဖော်နိုင်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုတောင်သတိမရနိုင်တော့ပါဘူး၊ ရှုးရှုးရှားရှားနဲ့ မျက်ရည်များတောင်ကျလို့ နှင်းစက်တွေထဲ ငိုယိုနေတဲ့သူလို၊ နဲရှောက ဘယ်လိုမှ ဟန်မပျက်လေဘူး၊ ကျွန်မ ကို ခေါင်းစွပ်ကြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စွပ်ပေး၊ မာဖလာပါ မျက်နှာတစ်ခြမ်းလောက်ထိအုပ်ပေး အသက်ရှုကြပ်လာလို့ ကျွန်မမှာ နှင်းစက်လေးတွေထဲ ပျော်ဖို့ သတိမရနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ အလုပ်တွေကိုရှုပ်လို့၊
ဒါပေမယ့် အံ့ဩဖို့တော့ကောင်းပါတယ်၊ အဲလို ဖြစ်တာ အချိန်သိပ်မကြာလိုက်ဘူး၊ နောက်တော့ နဲရှော မသိခင် အသာလေး မာဖလာချွတ်ပစ်၊ ခေါင်းစွပ်ပါချွတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ နှာတွေစေးပြီး မျက်ရည်ကျတာလဲ ရပ်သွားတယ်၊ ကျွန်မလဲ နှင်းစက်လေးတွေ ရဲရဲတင်းတင်းမော့ကြည့်နိုင်ပြီ၊ နဲရှောက “ဟန်နီရေ သိလား၊ ဒီလိုကျလာတဲ့ နှင်းလေးတွေက မြက်ခင်းတွေနဲ့ ပန်းပင်လေးတွေပေါ်ဖုံးကာထားပြီး၊ အရမ်းအေးလာတဲ့အချိန် သုညအောက်ထိ အပူချိန်သိပ်ကျသွားတဲ့ အချိန်မှာ အပင်လေးတွေရှင်သန်နေဖို့ အကာအကွယ်ပေးတယ်” တဲ့၊ ဒီလိုလား၊ တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နှင်းစက်တွေပါပဲ၊
နေ့ခင်းပိုင်းကျော်လာတာနဲ့ နှင်းစက်လေးတွေကနေ နှင်းချပ်လေတွေ အဖတ်လိုက် အဖတ်လိုက် အရွယ်အစားကြီးလာကြတယ်၊ သိပ်မကြာပါဘူး၊ လမ်းမပေါ်မှာရပ်ထားတဲ့ ကားတွေဆီမှာ နှင်းဖြူဖြူလေးတွေ ဖုံးကာနေရာယူလိုက်ကြပြီ၊ မြက်ခင်းလေးတွေပေါ်မှာပါ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး နှင်းချပ်လေးတွေလေးပြည့်နှက်လာကြပြီ၊ နှင်းစက်လေးတွေကနေ နှင်းချပ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်၊ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ open market ကို သွားဖြစ်ကြတယ်။ ဈေးထဲမှာလဲ တစ်ချို့ ဈေးဆိုင်တွေ သိမ်းနေကြပြီ၊ သူတို့တွေလဲ အအေးကိုကြောက်ကြတာပါပဲ။ ရာသီဥတုအေးအေးမှာ pancake ပူပူလေးဝယ်စားကြပြီး အိမ်ကိုပဲပြန်လာကြတယ်၊ ပိုပိုပြီးအေးလာတာကိုး။
အိမ်ရောက်တော့ မာမား(မေမေ)နဲ့တာတာ(ဖေဖေ)တို့ ၀ရံတာက ပန်းအိုးတွေကို အထဲကိုရွှေ့နေကြတယ်၊ အိမ်ထဲမှာ ပန်းအိုးတွေနေရာချကြနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေကြတယ်၊ ကျွန်မကတော့ မိုးအုံ့အုံ့၊ နှင်းစက်လေးတွေနဲ့ အဲဒီလိုရာသီဥတုမှာ အလိုလိုနေရင်း ပျော်နေတာပါပဲ၊ ညနေစောင်း နှင်းတွေမြေပြင်ပေါ်တော်တော်များများစုမိပြီဆိုရင် အပြင်ပြန်ထွက်ဦးမယ်၊ ထမင်းစား၊ ကော်ဖီဖျော်၊ ဥရောပသားတွေက ထမင်းစားပြီး ကိတ်၊ ကော်ဖီ ကို ဧည့်ခန်းမှာအေးအေးလူလူ ထိုင်သောက်ကြသေးတယ်၊ ကျွန်မကတော့ ကော်ဖီကို နည်းနည်းချင်းစီ သောက်နေတတ်တာ၊ နေ့လည်စာစားပြီး အဲလို ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်ပြီးမသောက်ချင် ဟိုသွား ဒီသွား၊ ကော်ဖီလေးသောက်လိုက် အင်တာနက်ကြည့်လိုက် စာအုပ်ဖတ်လိုက်၊ ခဏနေ ဒီနေရာ၊ နောက် ခဏနေ တခြားနေရာရောက်လိုက်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်မနေချင်တဲ့သူဆိုတော့၊ အိမ်ခန်းထဲ တတောက်တောက်နဲ့၊
နာရီတကြည့်ကြည့်၊ ညနေရောက်လာတော့ နှင်းတွေလဲ စုပုံ စုပြုံ နေကြပြီ၊ “နဲရှောရေ .. မြန်မြန်၊ အပြင်ထွက်ကြဦးစို့ရဲ့”.. ပြောလဲပြော ကျွန်မက အခန်းတံခါး အပြင်ဘက်ရောက်နေပြီ၊
လမ်းမပေါ်မှာ၊ ကားလေးတွေပေါ်မှာ၊ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ၊ သစ်ရွက်စိမ်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ နှင်းဖြူဖြူတွေ ပြည့်သိပ်လို့နေပါပြီ၊ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မ နှင်းလေးတွေကိုမကြောက်တော့ပါ၊ ဂုံးကျော်တံတားတွေရဲ့ လက်တမ်းပေါ်တစ်လျှောက်ဆွဲယူလာလိုက်တာ နှင်းတွေက ရေခဲချပ်တွေလို အရွယ်အစားကြီးလာတော့ အောက်ဘက်လမ်းမပေါ်ကားတွေပေါ်ကြမှာစိုးလို့ အရှိန်သပ်ရပါသေးတယ်။ မြက်ခင်ပေါ်ကနှင်းတွေဆွဲယူ လက်ထဲလုံးထွေးပြီး နဲရှောကို လှမ်းပစ်ရင်း ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးတာ သတိရလိုက်မိလို့ ရယ်လိုက်မိသေးတယ်၊ သူပြောပုံက အဲဒီမှာ ရေခဲဒီလောက်ပေါတာ နှင်းကျရင် ရေခဲခြစ်လုပ်ရောင်းပါလားတဲ့၊ လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့တဲ့ ကားမှန်တွေပေါ် ကာတွန်းရုပ်တွေလိုက်ဆွဲ၊ ကျွန်မ လျှောက်ဆော့သမျှ နဲရှော ကတော့ ဓါတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်နေတယ်။ တခြားဘယ်သူကမှ ကျွန်မလို နှင်းစက်လေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားသိပ်မရှိကြပါဘူး၊ နှင်းကျတဲ့နေ့က ရန်ကုန်မှာလိုပဲ လပြည့်ကျော်နေ့ တူနေပါတယ်၊
နှင်းကျနေတဲ့ ကောင်းကင်မှာတိမ်လိပ်တွေထူသိပ်နေပေမဲ့ လရောင်ကြောင့်ကောင်းကင်ကြီးက လင်းထိန်လို့၊
ကျွန်မ နှင်းစက်ဖြူဖြူလေးတွေကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်၊
သူတို့ မြေပြင်ပေါ်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာတဲ့လဲ ..
အဲဒီနေ့က တကယ့်ကို ပျော်ခဲ့ပါတယ်၊
နှင်းကျတဲ့နေ့က ကျွန်မ ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ် ...
No. 87၊ Teen Magazine? 2010
2:19 PM ဘာသာပြန်သီချင်း, သူရဲကောင်းတွေ နဲ့ ဆိုးသွမ်းလှတဲ့သူတွေ No comments
4:13 AM ကဗျာဆရာတစ်ဦးနဲ့ နာရီချိန်သီး, ဘာသာပြန်သီချင်း No comments
6:45 AM ဂီတပွဲအတွေ့အကြုံဆောင်းပါး, မြန်မာUnderground Band တွေရဲ့ သမိုင်းသစ် ဂီတပွဲ2comments